Ahoana ny fomba hamantarana ireo tombontsoa SEO eo amin'ny tranokalanao hanatsarana ny laharana amin'ny valin'ny fikarohana amin'ny fampiasana Semrush | Martech Zone
Ahoana ny fomba hamantarana ireo fahafaha-manao SEO eo amin'ny tranokalanao hanatsarana ny laharana amin'ny valim-pikarohana amin'ny fampiasana Semrush
Zoma, Febroary 19, 2021 Alarobia, Febroary 24, 2021 Douglas Karr
Nandritra ny taona maro dia nanampy fikambanana maro aho tamin'ny fananganana paikadin'ny votoatiny sy fanatsarana ny fahitana ny motera fikarohana rehetra. Mahitsy hatrany ny fizotrany:
Performance - Ataovy azo antoka fa mahomby ny tranonkalany momba ny hafainganam-pandeha.
Device - Hamarino fa ambony noho ny birao sy indrindra ny finday ny traikefan'izy ireo.
marika - Hamarino fa manintona, mora ampiasaina, ary mariky ny tombotsoany sy ny mahasamihafa azy ireo ny tranonkalany.
Content - Hamarino fa manana tranomboky atiny izay misy ny dingana tsirairay amin'ny dian'ny mpividy izy ireo, ary mampiasa ny salantsalany rehetra amin'ny pejy voalamina tsara.
Antso-To-Action - Ataovy izay hanomezan'izy ireo mpitsidika izay hataony manaraka amin'ny pejy tsirairay sy amin'ny atiny tsirairay.
Promotion - Hamarino fa manana tetika mavitrika izy ireo hiantohana ny atiny hozaraina amin'ny alàlan'ny media sosialy, lahatahiry avo lenta, indostria ary tranokala influencer.
Ny fikarohana dia tsy famokarana atiny fotsiny, fa famokarana atiny avo lenta avo indrindra raha oharina amin'ireo mpifaninana aminao.
Iza ireo mpifaninana amin'ny fikarohana anao?
Mety ho toy ny fanontaniana hafahafa izany, fa ny mpifaninana aminao amin'ny motera fikarohana dia tsy ireo orinasa manana vokatra sy serivisy mifaninana ihany. Ireo mpifaninana aminao amin'ny motera fikarohana dia:
Tranonkala indostrialy izay mifaninana amin'ny teny fanalahidy mitovy ary mety hanosika ny fifamoivoizana amin'ireo mpifaninana aminao.
Directories amin'ny Internet izay ny tanjona tokana dia ny hanomezana laharana tsara kokoa noho ianao mba hahazoanao terena hanao doka miaraka amin'izy ireo.
Tranonkala fanovozan-kevitra toa an'i Wikipedia izay manana fahefana ambony amin'ny fikarohana.
Tranonkala vaovao izay mety hifaninana aminao amin'ny marika marika anao noho ny fahefan'ny motera fikarohana azy ireo.
Tranonkala fampianarana izay mety misy kilasy na taranja mitovy lohahevitra amin'izany. Matetika ny tranonkala fanabeazana dia manana fahefana miavaka ihany koa.
haino aman-jery sosialy tranonkala izay manandrana mandray anjara mavitrika amin'ireo mety ho mpanjifanao mba hahafahanao manery anao hanao doka miaraka amin'izy ireo.
Tranonkala fampiroboroboana izay mifamatotra am-pahavitrihana amin'ireo mety ho mpanjifanao mba hahafahan'izy ireo mivarotra doka na mirotsaka amin'ny mpiara-miasa aminy.
Case in point, Martech Zone dia mpifaninana tanteraka amin'ny mpamatsy Martech maro raha ny laharana sy ny fifamoivoizana no resahina. Mba hahazoana vola amin'ny tranokalako dia mila mifaninana aho ary mandresy amin'ny teny filamatra mifaninana sy avo làlana. Rehefa manao izany aho dia maro ny olona no hanindry ny doka amin'ny tranokalako na ny rohy mifandraika - mitondra vola. Ary matetika, ny laharako dia mitarika any amin'ireo orinasa manohana lahatsoratra sy sokajy hanandramana sy hitondra fiara bebe kokoa hitarika ny làlan-dry zareo.
Ahoana no ahitanao ireo mpifaninana amin'ny fikarohana?
Na dia mety mieritreritra aza ianao fa afaka manao fikarohana fotsiny dia hahita hoe iza no hiseho valiny, tsy izany no fomba lehibe hamantarana hoe iza ireo mpifaninana aminao. Ny antony dia satria ny motera fikarohana dia manavaka ireo pejy valin'ny motera fikarohana (SERPs) ho an'ny mpampiasa motera fikarohana - na ny lohahevitra na ny jeografika.
Noho izany, raha tena te-hamantatra ny fifaninanana ianao dia tokony hampiasa fitaovana toy izany Semrush izay manangona sy manome ny fahiratan-tsaina ary ny tatitra momba ny valin'ny motera fikarohana.
Semrush afaka manampy anao hamantatra ny fomba fampandehanana ny domaine amin'ny teny lakile ary hanampy anao hamantatra ny banga sy ny fotoana ahafahanao manatsara ny laharana ankapobeny manohitra ny fifaninanana.
Dingana 1: Jereo ny laharan'ny laharam-pehiranao amin'ny teny lakile
Ny dingana voalohany ataoko rehefa manao fikarohana mifaninana dia ny mamantatra hoe aiza no efa laharako. Ny antony mahatonga an'io dia tsotra ihany… mora kokoa amiko ny manatsara sy mamindra amin'ny teny lakile izay efa nalahatro fa tsy ny manandrana manome laharam-pahamehana amin'ny teny lakile izay tsy ahitana ny tranokalako.
Tsy mitovy ny sivana ampiasako:
Position - Manomboka amin'ny laharana 4-10 aho satria efa eo amin'ny pejy 1 ary raha afaka mahazo ny laharana 3 dia fantatro fa hampitombo ny fifamoivoizako aho.
Fahasamihafana eo amin'ny toerana misy azy - Tiako ny mijery ireo toerana izay efa ampitomboako ny laharam-bolako isam-bolana satria midika izany fa mahazo fahefana ny atiny ary mety afaka manatsara sy mampiroborobo azy indray aho handroahana izany hatrany.
Volume - Raha an'aliny na ana hetsiny ny isan'ireo boky, azoko atao ny manatsara ireo pejy ireo fa tsy manantena valiny eo noho eo aho. Vokatr'izany dia mazàna aho mitady volan'ny fikarohana eo anelanelan'ny fikarohana 100 sy 1,000 isam-bolana.
Fandalinana tranga momba ny fanatsarana ny pejy misy laharana
Ho hitanao fa niroso aho Fifaninanana Fetin'ny mpifankatia. Teny lakile izay niasako tamin'ny volana lasa teo ho fanomanana ireo mpivarotra izay nanao fikarohana tamin'ny fifaninanana media sosialy… ary nandaitra! Nahazo fitsidihana an'arivony aho tamin'ny alàlan'ny fanatsarana lahatsoratra efa antitra sy famelombelona ireo angona sy sary ao. Nohatsaraiko mihitsy aza ilay slug post mba hikendrena tsara kokoa ny teny lakile, nanova ny “valentines-day-campagne” ho lasa “valentines-day-social-media-contests”.
Tamin'ny taon-dasa, nahazo mpitsidika 27 teo ho eo avy tamin'ny motera fikarohana aho teo anelanelan'ny 1 sy 15 feb. Tamin'ity taona ity, 905 ny fitsidihan'ny motera fikarohana ahy. Fisondrotana tsara amin'ny fifamoivoizana biolojika izany ho an'ny fanitsiana kely ny atin'ny pejy.
Dingana 2: Fantaro ny fanararaotan'ny teny lakile
Ny teny lakile voalohany amin'io lisitra io dia marika iray, noho izany tsy azoko antoka fa hanana laharana tsara na handresy izany fifamoivoizana izany aho. Raha misy mitady Acquire.io… mety ho tadiavin'izy ireo ilay tranonkala.
Na izany aza, ny teny lakile faharoa - tranomboky atiny - dia iray izay tena liana tanteraka amin'ny laharana tsara kokoa. Izy io dia ivon'ny serivisy ho an'ny orinasako ary maniry mafy ny hanampy ireo mpivarotra ho tonga mahomby sy mahomby kokoa amin'ny famokarana atiny hitondra ny valin'ny marketing.
SOSO-KEVITRA: Efa mitana ny teny manodidina azy ve izany pejy izany?
Aza adino fa tena afaka mandratra ny fivezivezena mikaroka amin'ny ankapobeny ianao raha mandray pejy avo lenta ary manimba ny fanatsarana azy ho an'ny teny lakile manokana. Ka, ny zavatra faharoa ataoko dia ny mahita hoe inona koa no laharana pejy manokana amin'ny fipihana ny URL ao amin'ny Semrush tatitra. Hamafana ny sivana rehetra aho ary avy eo dia alaharo araka ny toerana ilay lisitra.
Ka… tsara izao. Raha milahatra aho trano ary famoronana trano famakiam-boky momba ny atiny, miharihary fa miakatra ny laharam-pahamehako tranomboky atiny hitondra fifamoivoizana bebe kokoa amin'ny tranokalako.
Jereo koa, ao amin'ny Fomba fiasa SERP fa misy sombiny, horonan-tsary ary tsikera misy. Te hahita aho raha nampiditra zavatra afaka manampy amin'ny lahatsoratro izay efa nilahatra.
Dingana 3: Fantaro ireo mpifaninana amiko SEO
Raha tsindrio aho tranomboky atiny ao amin'ny tsanganana voalohany, hitako izao hoe iza ny mpifaninana amiko ao amin'ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana:
Dingana 4: Ampitahao amin'ny atiny misy azy ny atiny
Amin'ny fampiasana ireo fiasa SERP avy teo aloha sy ny famakafakana ireo pejy tsirairay ireo dia afaka manome tolo-kevitra momba ny fanatsarana ny atiny ankapobeny aho mba hahitana index tsara kokoa tranomboky atiny, ary koa amariho ny fotoana sasany ahafahana mampiroborobo azy io handraisana ireo rohy miverina… izay hanome toerana tsara kokoa ahy amin'ny farany.
Raha ny marina dia manana backlinks betsaka kokoa amin'ny pejiko aho noho ireo pejy marobe amboniko. Mazava ho azy, ny sasany amin'ireny faritra ireny dia manana fahefana lehibe kokoa noho izany, satria notanterahiko ho ahy ny asako. Ilay lahatsoratra ambony toerana eo amin'io pejy io dia toa nosoratana tamin'ny 2013, ka vao mainka aho matoky fa afaka mitondra valiny tsara kokoa. Ary, amin'ny famakafakana ny lisitry ny lahatsoratra… ny sasany amin'izy ireo dia tsy misy ifandraisany amin'ny teny lakile mihitsy.
Dingana 5: Hatsarao ny atiny
Aleo atrehana… tsy ny lahatsoratro no lehibe indrindra… ka tokony hanatsara azy kokoa izao. Amin'ity tranga ity dia mino aho fa afaka:
Manatsara ny lohateny ny lahatsoratra.
Ampidiro ny mahasarika kokoa sary asongadina izany dia handroaka fifamoivoizana bebe kokoa amin'ny fampiroboroboana ny media sosialy.
Manampy Video izay hanazavako ny paikady amin'ny ankapobeny.
Manampy bebe kokoa Kisary ao anatin'ilay lahatsoratra.
Ampidiro bebe kokoa antsipirihany manodidina ny dian'ny mpividy sy ny fomba hanosika ny atiny hifandray sy hiova fo bebe kokoa.
Amin'ity tranga ity, mino aho fa ny fanavaozana ny atiny sy ny famolavolana azy amin'ny media sosialy dia ampy handefasana valim-pikarohana tsara kokoa. Ny onjan'ny olona vaovao mamaky ny atiny sy mizara azy an-tserasera dia manome ny tondro ilaina amin'ny Google fa ny atiny dia ambony, vaovao ary tokony hilahatra tsara kokoa.
Dingana 6: Avereno aparitaho ary ampiroborobo ny atiny
Raha eo amin'ny bilaoginao ny lahatsoratrao, aza matahotra ny hamoaka indray ny atiny ho vaovao, mitazona URL sy slug mitovy. Satria efa laharana ianao dia tsy te-hanova ny URL an'ny pejinao!
Ary, raha vantany vao havoaka, dia te hizara sy hampiroborobo ny atiny ianao amin'ny alàlan'ny mailaka mailakao, sonia mailaka ary manerana ireo mombamomba anao.
Dingana 7: Jereo ny Analyticso ary Semrush!
Matetika aho mahita fisondrotana eo noho eo amin'ny fitsidihana aorian'ny famoahana indray sy fampiroboroboana ny atiny fa tsy fanovana eo noho eo amin'ny laharana ankapobeny. Matetika aho no mamerina mitsidika Semrush in 2 ho 3 herinandro hahitana ny fiantraikan'ny fanovana nataoko teo amin'ny laharana ankapobeny ho an'io URL manokana io.
Ity dia paikady mandresy izay aparitako isan-kerinandro ho an'ny mpanjifako… ary mahatalanjona ny fomba fiasany.
Atombohy amin'ny Semrush!
Raha matotra amin'ny fampiasana atiny hitroarana ny fitomboan'ny organika ianao dia aza hadino ny mijery Semrush's Toolkit Marketing amin'ny atiny izay ahafahanao mikasa, manoratra ary mamakafaka ny atiny rehetra amin'ny toerana iray.
The Semrush Ny Content Marketing Platform dia manome vahaolana marobe amin'ny famolavolana paikady atiny mahomby sy famoronana atiny izay mampiditra ny mpihaino anao. Atambaro ny fahaiza-mamorona sy ny analytics amin'ny dingana tsirairay amin'ny fandehananao.
Semrush dia natsangana indray ary ny azy ireo ny database keyword dia nitombo hatramin'ny 17.6B ka hatramin'ny 20B. Roa taona lasa izay dia nahitana teny lakile 2B fotsiny - izany Fitomboana 10x! Nanitsy ny tetikasan'izy ireo koa izy ireo:
Pro - Ireo mpiasa tsy miankina, mpanombohana ary mpivarotra ao an-trano dia mampiasa an'io fonosana io hampitomboana ny tetikasan'ny SEO, PPC, ary SMM.
Andramo Semrush Pro maimaim-poana!
Guru - Ireo masoivohon'ny orinasa kely sy marketing dia mampiasa an'ity fonosana ity. Izy io dia manana ny endri-javatra pro rehetra ankoatra ny sehatra marketing marketing atiny, angona data, ary ny fampidirana Google Data Studio.
Andramo Semrush Guru Maimaim-poana!
Business - Ireo masoivoho, tetikasa e-varotra ary tranokala lehibe no mampiasa ity fonosana ity. Tafiditra ao ny fidirana API, misy fetra farany voafetra sy fifampizarana ary tatitra momba ny Share of Voice.
Misoratra anarana To Semrush Business
Fampahafantarana: Izaho dia mpiara-miasa amin'i Semrush ary mampiasa ny rohy iandraiketan'izy ireo mandritra ity lahatsoratra ity aho.
Tags: famakafakana ny filaharana atinyny fomba fanatsarana ny laharanany fomba fikarohana ireo mpifaninana an-tseraserafahafaha-mikaroka organikfanadihadiana ny motera fikarohanapejy momba ny valin'ny fikarohanavalin'ny fikarohanasemrushseo famakafakanaseo fandinihana fifaninananaseo fotoanaseo laharana
Froala: Ampitomboy ny sehatr'asao miaraka amin'ny WYSIWYG Rich Text Editor